Soomaaliya iyo Rwanda oo isku furaya Albaabada ganacsiga | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Soomaaliya iyo Rwanda oo isku furaya Albaabada ganacsiga
written by Haji 08/02/2020
Dowladaha Soomaaliya iyo Rwanda ayaa kala saxiixday heshiis la isu furayo hawada labada dal si loo sahlo ganacsiga labada dal, iyo sidoo kale isku socodka bulshada.
Maxamed Cabdulaahi Salad Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada oo ku sugan dalka Rwanda ayaa heshiiskan la kala saxiixday dhigiisa dalka Rwanda, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka faaideysan doonto horumarka ka jira dalka Rwanda.
Wasiirka Kaabayaasha dalka Rwanda Gatete ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay kii boqolaad oo ay dalal caalamka ka tirsan la saxiixatay dowlada Rwanda, uuna rajeynayo in albaabo ganacsi oo cusub u furo labada dal.
Soomaaliya iyo Rwanda oo isku furaya Albaabada ganacsiga was last modified: February 8th, 2020 by Haji
Wararkii ugu dambeeyay cudurka Coronovirus
Shiinaha: Carro iyo murugo ka dhalatay markii uu geeriyooday dhaqtarkii dadweynaha uga digay Coronavirus
Dhageeyso+Sawiro:-Maxamed Madey macalin sagar oo u xanuunsanaa cudurka kansarka ayaa Shaleey lagu aasney magaalada Muqdisho
QARAX LALA BEEGSADEY CIIDAMO AMISOM AH .
Akhriso:-Yusuf Garad oo ku baaqay in aan la dhayalsan hadalkii ka soo yeeray Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed